Tether စျေး - အွန်လိုင်း USDT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Tether (USDT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Tether (USDT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Tether ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $4 656 441 705.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Tether တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Tether များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
TetherUSDT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$1TetherUSDT သို့ ယူရိုEUR€0.848TetherUSDT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.767TetherUSDT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.911TetherUSDT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr8.9TetherUSDT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.6.31TetherUSDT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč22.16TetherUSDT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł3.73TetherUSDT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$1.32TetherUSDT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$1.4TetherUSDT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$22.22TetherUSDT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$7.76TetherUSDT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$5.37TetherUSDT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹74.94TetherUSDT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.169.01TetherUSDT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$1.37TetherUSDT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$1.53TetherUSDT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿31.1TetherUSDT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥6.95TetherUSDT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥107.03TetherUSDT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1187.18TetherUSDT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦387.84TetherUSDT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽73.3TetherUSDT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴27.51
TetherUSDT သို့ BitcoinBTC0.00009 TetherUSDT သို့ EthereumETH0.00261 TetherUSDT သို့ LitecoinLTC0.0184 TetherUSDT သို့ DigitalCashDASH0.011 TetherUSDT သို့ MoneroXMR0.0112 TetherUSDT သို့ NxtNXT78.09 TetherUSDT သို့ Ethereum ClassicETC0.148 TetherUSDT သို့ DogecoinDOGE288.91 TetherUSDT သို့ ZCashZEC0.0122 TetherUSDT သို့ BitsharesBTS30.84 TetherUSDT သို့ DigiByteDGB32.03 TetherUSDT သို့ RippleXRP3.56 TetherUSDT သို့ BitcoinDarkBTCD0.0345 TetherUSDT သို့ PeerCoinPPC3.32 TetherUSDT သို့ CraigsCoinCRAIG456.17 TetherUSDT သို့ BitstakeXBS42.69 TetherUSDT သို့ PayCoinXPY17.48 TetherUSDT သို့ ProsperCoinPRC125.62 TetherUSDT သို့ YbCoinYBC0.000538 TetherUSDT သို့ DarkKushDANK321.29 TetherUSDT သို့ GiveCoinGIVE2168.41 TetherUSDT သို့ KoboCoinKOBO228.09 TetherUSDT သို့ DarkTokenDT0.922 TetherUSDT သို့ CETUS CoinCETI2891.62